Man City oo guul ay u qalantay ka gaartay kooxda Man Utd kulanka lugta hore wareegga afar dhammaadka ee tartanka Carabao Cup… +SAWIRRO – Gool FM
Dajiye January 8, 2020
(Manchester) 08 Jan 2020. Man City ayaa guul muhiim ah ka soo heshay kooxda Man Utd oo ay ku booqatay garoonka Old Trafford kulanka lugta hore wareega afar dhamaadka ee tartanka Carabao Cup, waxayna kaga soo adkaatay 1-3.
Qeybta hore ciyarta ayaa lagu kala maray 0-3 ay ku hoggaamineeysay kooxda martida aheyd ee Manchester City.
Daqiiqadii 17-aad kooxda Manchester City ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay xiddiga reer Portugal ee Bernardo Silva, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Kyle Walker.
33 daqiiqo kooxda Manchester City ayaa la timid goolkeeda labaad ee ciyaarta iyadoo uu 0-2 ka dhigay Riyad Mahrez, waxaana goolkan ka caawiyay Bernardo Silva.
Daqiiqadii 39-aad Manchester City ayaa sii dheereysatay hoggaanka ciyaarta kaddib markii uu gool iska dhaliyay xiddiga Man United ee Andreas Pereira, dheesha ayaana sidaas ku noqotay 0-3.
Daqiiqadii 70-aad Manchester United ayaa dhalisay gool waxaana ciyaarta 1-3 ka dhigay weeraryahanka England ee Marcus Rashford, kaddib markii uu si qurux badan goolkan kaga caawiyay saaxiibkiis Mason Greenwood.
Ugu dambeyntii ciyaarta ayaa waxay ku soo dhamaatay 1-3 ay guusha ku raacday kooxda martida aheyd ee Manchester City, xilli kulanka lugta labaad ee wareegan lagu ciyaari doono garoonka Etihad.
Kooxaha Heegan iyo Dekedda fc oo galabta ku balansan garoonka Eng Yariisow